Chọtara 101 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Ma amaara m unu. Amaara m na ịhụnanya Chineke adịghị nꞌime unu.
“Dị ka Nna m si hụ m nꞌanya otu a ka m si hụkwa unu nꞌanya. Ya mere nọgidenụ nꞌime ịhụnanya m.
Unu ga-anọgide nꞌịhụnanya m ma ọ bụrụ na unu edebe ihe nile m nyere unu nꞌiwu. Mụ onwe m na-anọgidekwa nꞌịhụnanya nke Nna m nꞌihi na m naedebe ihe nile o nyere nꞌiwu.
Emeela m ka ha mata onye ị bụ. Aga m agakwa nꞌihu na-egosi ha ihe omimi nile dị nꞌime gị, tutuu ruo mgbe a ga-eme ka ịhụnanya i nwere nꞌebe m nọ dịgide nꞌime ha, tutuu ruo mgbe m ga-ebikwa nꞌime ha.”
Ma akpọghị m ndụ m ihe ọ bụla karịa na m ji ya arụrụ Onyenwe anyị ọrụ, ọrụ izisa ozi ọma nye ndị ọzọ banyere oke ebere na ịhụnanya Chineke.
Nꞌihi na nke a bụ ihe m maara nke ọma, bụrụkwa ihe doro m anya, na ọ dịghị ihe pụrụ ikewapụ anyị site nꞌịhụnanya Chineke. Ọnwụ, ma ọ bụ ndụ enweghị ike ya, ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ike nile dị nꞌeluigwe enweghị ike igbochi Chineke ịhụ anyị nꞌanya. Ọ bụladị ihe ọjọọ nile na-eme nꞌụwa taa, na nchegbu banyere ihe ga-eme echi, apụghị igbochi ịhụnanya Chineke.
Ịhụnanya Chineke ga-erute anyị ebe ọ bụla anyị nọ, nꞌelu mbara eluigwe, ma ọ bụ nꞌokpuru osimiri nke ụwa. Nꞌezie, ọ dịghị ihe ọ bụla Chineke kere eke pụrụ ikewapụ anyị site nꞌịhụnanya Chineke.
Chineke sitere nꞌọnụ onye dere akwụkwọ Hosiya kwuo okwu sị, “Aga m achọtara onwe m ndị ọzọ ga-abụ ụmụ m, ndị na-esiteghị nꞌagbụrụ ndị Juu. Aga m ahụ ndị a nꞌanya, bụ ndị onye ọ bụla na-egosibeghị ịhụnanya mgbe ọ bụla.”
O nweghị onye na-echere onye ọ hụrụ nꞌanya echiche ọjọọ. Ọ bụ nke a mere ịhụnanya ji bụrụ idebezu iwu nile.
Esi m nꞌaka Onyenwe anyị Jisọs Kraịst na ịhụnanya anyị nwere nꞌime Mmụọ Nsọ na-arịọ unu, ụmụnna m, ka unu soro m kpee ekpere, na-echeta m nꞌekpere unu nꞌihu Chineke.
1 KỌRINT 8:1
Ajụjụ ọzọ unu jụrụ bụ ihe banyere iri anụ e ji chụọra arụsị aja. Nꞌụdị ajụjụ dị otu a onye ọ bụla na-eche na ọsịsa nke ya dị mma. Ma ọ bụ ezie na anyị na-anya isi nꞌihi na anyị na-akpọ onwe anyị ndị maara ihe, ma ihe dịkarịsịrị mkpa iji iwuli ụlọ nzukọ Kraịst elu bụ nanị ịhụnanya.
1 KỌRINT 13:6
Ịhụnanya adịghị aṅụrị ọṅụ nꞌihe ọjọọ, ọ hụrụ eziokwu nꞌanya.
1 KỌRINT 13:8
Ịhụnanya adịghị agwụ agwụ. Ma ibu amụma nile ga-emesịa kwụsị, onyinye ịsụ asụsụ dị iche iche ga-akwụsịkwa. Otu a, ihe ọmụma nile ga-agabiga.
1 KỌRINT 16:24
Ka ịhụnanya m dịnyere unu site nꞌOnyenwe anyị Jisọs Kraịst. Amin.
2 KỌRINT 4:15
Nꞌihi na ahụhụ ndị a anyị na-ata ugbu a, bụ nꞌihi ọdịmma nke unu. Nꞌihi na ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ ekwenye na Kraịst, ọtụtụ mmadụ ga-enyekwa Chineke ekele nꞌihi oke ịhụnanya ya. A gaesikwa otu a nye aha Chineke otuto karịa.
2 KỌRINT 5:14
Ọ bụ ịhụnanya Kraịst na-akwagide anyị, nꞌihi na ọ bụrụ na anyị kwenyere na Kraịst nwụrụ nꞌọnọdụ mmadụ nile, anyị na-ekwerekwa na mmadụ nile nwụrụ nye ndụ ochie ha mgbe Kraịst nwụrụ.
2 KỌRINT 7:13
Ewezugakwa ụzọ unu si gbaa anyị ume site nꞌịhụnanya unu nwere nꞌebe anyị nọ, a gbara anyị ume karịa site na nnabata unu nabatara Taitọs, na otu unu si mee ka mmụọ ya zuru ike mgbe ọ bịakwutere unu.
2 KỌRINT 7:15
Ugbu a, ịhụnanya o nwere nꞌebe unu nọ na-aba ụba nke ukwuu, nꞌihi ncheta ọ na-echeta otu unu nile si jiri ọṅụ gee ya ntị na otu unu si jiri ịtụ egwu na ahụ ịma jijiji nabata ya.
2 KỌRINT 8:19
Ma ọ bụghị nanị nke a, kama ndị nzukọ Kraịst nile họpụtara ya iso anyị, na inyere anyị aka nꞌije ozi ịhụnanya a, nꞌụzọ ọ ga-esi wetara Onyenwe anyị otuto. Ije ozi a ga-ezipụta na anyị jikeere inyere ibe anyị aka.
2 KỌRINT 12:15
Nꞌezie, ọ na-atọ m ụtọ iwere onwe m na ihe nile m nwere nye unu, maka ọdịmma ndụ mmụọ unu, nꞌihi na ahụrụ m unu nꞌanya. Ma ọ na-adị m ka mgbe ịhụnanya m nꞌebe unu nọ na-adị ukwuu, mgbe ahụ ka ịhụnanya unu nꞌebe m nọ na-adị nta.
O juru m anya, na unu esitela nꞌebe Chineke nọ wezuga onwe unu, na-agbaso ozi ọma ọzọ, nke na-abụghị ozi ọma Chineke, Onye jiri amara ya, na ịhụnanya ya, kpọbata unu, ime ka unu keta ndụ ebighị ebi ahụ ọ na-enye site na Kraịst.
Ana m arịọkwa, ka unu na ndị Kraịst nile nwee ike ịghọta enweghị atụ nke ịba ụba na ịdị ukwu nke ịhụnanya Kraịst nꞌebe anyị nọ.
Ka unu mata, mazuokwa ụdị ịhụnanya Kraịst nwere nꞌebe anyị nọ. Ka unu bụrụkwa ndị e mere ka ha jupụta nꞌọdịdị Chineke nꞌonwe ya.
Ọ bụkwa nꞌihi nke a ka m ji na-ekpesi ekpere ike, ka ịhụnanya unu na-ahụrịta onwe unu na-aba ụba. Ka unu nwee ike ito eto, ruo nꞌinwe mmazu na nghọta nke eziokwu ahụ.
Ọ bụ ya gwara anyị ihe banyere ịhụnanya Mmụọ Nsọ nyere unu.
Ihe m na-arịọ Chineke nꞌihi unu bụ ka ọ gbaa unu ume, jikọtaa unu nꞌotu nꞌime ịhụnanya, ka unu nwee ike ịmaju Kraịst nke ọma, na ịghọtazi ya. Nꞌihi na nzube omimi nke Chineke ahụ bụ Kraịst nꞌonwe ya.
Mgbe nile ka anyị na-echeta nꞌekpere nye Chineke bụ Nna, ihe gbasara ọrụ unu nke sitere nꞌokwukwe, ya na ịrụsị ọrụ ike unu nke sitere nꞌịhụnanya, na iguzosị ike unu nke sitere nꞌolileanya unu nwere nꞌOnyenwe anyị Jisos Kraịst.
1 TESALỌNAIKA 3:12
Ka Chineke meekwa ka ịhụnanya unu too eto, ka ọ babiga oke, rute ibe unu, na ndị ọzọ kwa, dị ka ịhụnanya anyị si dị nꞌebe unu nọ.
Ugbu a, ihe gbasara ịhụnanya nke kwesịrị ịdị nꞌetiti ụmụnna, o kwesịghị ka anyị gwa unu ihe ọzọ banyere ya. Nꞌihi na Chineke nꞌonwe ya na-ezi unu inwe ịhụnanya nꞌebe ibe unu nọ.
Inye Chineke ekele nꞌihi unu abụghị nanị ihe dị mma ka anyị mee, kama ọ bụ ụgwọ ọrụ anyị ji Chineke, ụmụnna anyị, karịsịa, mgbe anyị chetara na dị ka unu si na-eto eto nꞌime okwukwe unu na otu a ka oke ịhụnanya unu nwere nꞌebe ibe unu dị si bụrụ ihe a na-enweghị ihe a ga-eji tụnyere ya.
Ma ọ ga-azọpụta ndị inyom site nꞌọmụmụ nwa ha ma ọ bụrụ na ha anọgide na-ebi ndụ okwukwe na ịhụnanya, na ịdị nsọ, na nke uche zuru oke.
Jidesie eziokwu ahụ aka ike, ụdị eziokwu ahụ nke mụ onwe m ziri gị, eziokwu ahụ nke gbasara okwukwe ahụ, na ịhụnanya ahụ dị nꞌime Kraịst Jisọs.
2 PITA 1:7
Mgbe anyị mere nke a, anyị ga-agakwa nꞌihu ime ka ihe gbasara ndị ọzọ na-adị anyị mma. Nke a ga-eme ka ịhụnanya anyị nwere nꞌebe ndị ọzọ nọ baa ụba.
1 JỌN 3:18
Ndị m hụrụ nꞌanya, ka ngosi anyị na-egosi ịhụnanya anyị nꞌebe ndị ọzọ nọ ghara ịbụ nanị nꞌegbugbere ọnụ anyị na ikwu okwu efu. Kama ka anyị na-egosi ya site nꞌokwu ọnụ anyị na omume anyị.
1 JỌN 4:9
Nꞌihi na Chineke gosiri anyị ịdị ukwuu nke ịhụnanya ya site nꞌizite Ọkpara ya ka o wetara anyị ndụ ebighị ebi site nꞌọnwụ ọ nwụrụ.
1 JỌN 4:12
Ọ bụ ezie na o nwebeghị mgbe ọ bụla anyị ji anyạ anyị hụ Chineke anya, ma ọ bụrụ na anyị ahụ ibe anyị nꞌanya, Chineke na-ebi nꞌime anyị. Ịhụnanya ya kwa na-eto eto nꞌime anyị.
1 JỌN 4:18
Anyị adịghị atụ onye hụrụ anyị nꞌanya ụjọ. Ezi ịhụnanya o nwere nꞌebe anyị nọ na-ewezụga ụjọ ọ bụla anyị nwere banyere ihe ọ ga-eme anyị. Ọ bụrụ na anyị na-atụ ya ụjọ, o gosiri na anyị enweghị afọ ojuju na ọ hụrụ anyị nꞌanya nꞌezie.
1 JỌN 5:2
Anyị pụrụ isite nꞌụdị ịhụnanya anyị nwere nꞌebe Chineke nọ ya na ụdị nrube isi anyị na-erubere ya mata na anyị hụrụ ụmụ Chineke nꞌanya.
3 JỌN 1:6
Ha akọọrọla nzukọ Kraịst nọ nꞌebe a ihe banyere mmeso ọma ịhụnanya i mesoro ha. Biko, mgbe ha si nꞌebe ahụ na-apụ, nyekwara ha aka nꞌije ha dị ka ọ ga-esi tọọ Chineke ụtọ.
Ọ bụ Jud, onyeozi Jisọs Kraịst, nwanne Jemes na-edetara unu akwụkwọ a, unu nile Chineke kpọrọ, họpụta, ndị na-adị ndụ nꞌime ịhụnanya ya, na ndị nọkwa nꞌokpuru nchebe Jisọs Kraịst.
Ka ebere na udo na ịhụnanya Chineke bụrụ nke unu. Ka ha mụbaakwa nꞌetiti unu.
Mgbe ndị a sooro unu nọdụ iri oriri ịhụnanya unu ha dị ka ntụpọ ọjọọ nꞌetiti unu. Ọchị na-eju ha ọnụ mgbe ha ji nri na-afọju ọnụ ha, na-eri nri dị ka ndị ihere na-adịghị eme. Ha anaghị echekwa echiche banyere ndị ọzọ. Ha dị ka igwe ojii nke ikuku na-ebugharị, nke na-adịghị ezo mmiri. Ha na-ekwe nkwa elu na ala, ma ihe ọ bụla adịghị esi ha nꞌaka apụta. Ha dị ka osisi na-adịghị amị mkpụrụ, ọ bụladị nꞌudu mmiri. Ha bụ ndị nwụrụ anwụ, ndị e fopụrụ efopụ site na mgbọrọgwụ ha ka a kpọọ ha ọkụ.
Doonụ onwe unu nꞌokpuru ịhụnanya Chineke, ebe unu ga-anọ na-eche ịnata ndụ ebighị ahụ Onyenwe anyị Jisọs Kraịst ga-esite nꞌebere ya nye unu.
Chee echiche nke ọma banyere ịhụnanya i nwere nꞌebe m nọ na mmalite, ma laghachi azụ nꞌime ya. Malite ịrụsị ọrụ ike dị ka i mere na mmalite. Ọ bụrụ na i meghị otu a, aga m abịakwute gị wepụ oriọna nọchiri anya gị nꞌebe ọ dị nꞌetiti oriọna ndị ọzọ.